ARAG SAWIRRADA: Siddeed Nin oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo maanta lagu soo bandhigay Kismaayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta ARAG SAWIRRADA: Siddeed Nin oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo maanta lagu soo...
ARAG SAWIRRADA: Siddeed Nin oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo maanta lagu soo bandhigay Kismaayo
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa Arbacadii maanta magaalada Kismaayo lagu soo bandhigay siddeed nin oo sida la sheegay ka mid ah maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Hay’adda Nabad Suggida Jubbaland ayaa raggaasi ku soo bandhigtay magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Raggan ayaa waxaa la sheegay inay ka towbad keeneen fekerka khalafsan ee Shabaabnimada, isla-markaana ay isu soo dhiibeen Maamul Goboleedka Jubbaland.
Taliska Nabad Suggida ayaa baaritaan dheer kadib la sheegay in raggaasi uu ku wareejiyay maamulka xarunta lagu dhaqanceliyo Shabaabka isa soo dhiiba, ee ku taala Magaalada Kismaayo.
Si kastaba, isa soo dhiibista raggan ayaa timid, kadib baaqii bishii hore ka soo yeeray General Aadan Maxamuud Ibraahim, Taliyaha Guud ee Ciidamada Jubbaland, ee ku aadanaa inay isa soo dhiibaan maleeshiyada Shabaabka, ka hor inta aan dagaalka lagu soo qaban.
Jubbaland oo sideed nin oo Al Shabaab ah ku soo bandhigay Kismaayo